Wararka - Farsamaynta lathe ee CNC oo xoqeysa astaamaha aasaasiga ah
Farsamaynta lathe CNC ee xoqeysa sifooyinka aasaasiga ah waa:
Awoodda wax lagu shiido waa sarreysaa. Mashiinka shiidi kara marka loo eego qaybta shaqada ee wareegga xawaaraha sare, sida caadiga ah xawaaraha xawaaraha wheel35m / s, qiyaastii 20 jeer aaladda caadiga ah, mashiinku wuxuu heli karaa heerka ka-saarista biraha ka sarreeya. Horumarinta ku shiidi tiknoolajiyada cusub, awoodda wax shiidku waxay sameyneysaa horumar dheeri ah, howlaha qaar waxay bedeleen leexashada, shiidida, qorsheynta, si toos ah howsha qallafsan.
2.Can heli karaa saxitaanka machining sax sare iyo qallooc dusha aad u hooseeya Mid kasta oo goos goos ah oo goos goos ah lakabka jajabku aad ayuu u khafiifsan yahay, badiyaa wuxuu leeyahay dhowr mikroonoon, sidaa darteed muuqaalka ayaa heli kara saxnaan sare iyo qallooc dusha sare leh. Badanaa waxay saxan tahay illaa IT6 ~ IT7, dusha sare ee culeyska ayaa gaara ilaa08-0.051xm; shiidi sare sax lagu gaari karaa sare.
3. Goynta awooddu waa weyn tahay, tamar badan ayaa cunaysa. Shaagagga wax lagu shiido wuxuu ka kooban yahay fara badan oo CNC ah oo xoqan, qaybinta miraha la xoqdo ee giraangirta wax lagu shiido waa fowdo, iyadoo inta badan laga jaro xagasha raajada xun (-15 '- 85'), caaraduna waxay leedahay goobaab gaar ah oo loo yaqaan 'Arc radius', oo sidaas awgeed awoodda goynta waa weyn tahay, tamarta mashiinka cunista ayaa badan.
4Wideprocessing kala duwan. Mashiinka mashiinka xoqidda leh wuxuu leeyahay adkaansho sare, xasiloonida kuleylka, kaliya laguma shaqeyn karo bir aan qallafsaneyn, birta birta ah iyo biraha aan birta ahayn iyo qalabka kale, laakiin sidoo kale waa la farsameyn karaa birta adag, dhammaan noocyada qalabka jarista iyo qalabka mashiinka adag sida sare qalabka adag.
Dabacsanaanta sare. Beddelka barnaamijka softiweerka ah ayaa si fudud loogu beddeli karaa xaddi gaar ah oo ka bilaabmaya ka shaqaynta hal qayb ilaa ka shaqaynta qayb kale, taas oo si weyn hoos ugu dhigaysa hagaajinta qalabka iyo wakhtiga diyaarinta wax soo saarka.
6.U buuxi hawlgalka mashiinka iyo habka otomatiga.
Wuxi Lead qiray Makiinado Co., Ltd waxay siisaa macaamiisha dhammaan cabirrada dhammeystiran adeegyada macdanta birta ee qaabab u gaar ah leh.